मार्क्सवादको मृत्यु हुन्छ ? माओ भन्छन्- ‘हुन्छ’, यस्ता छन् माओका गहनतम दार्शनिक आधारहरु-Nepali online news portal
माओ,२४ अगस्ट, १९६४
अध्यक्ष ः यसको रूप रूपान्तरण हुँदा पनि फैलन्छ र बाफ बन्दछ जसले गति पैदा गर्दछ । एक्स–एक्स–एक्स : अणुहरूको गतिले ऊर्जा पैदा गर्दछ ।
अध्यक्ष : उनीहरू भयभीत भएको भए राम्रो भएको छ, नभएको भए खराब हुन्थ्यो । हामी अमेरिकादेखि डराउँछौँ किनभने ऊ हाम्रो दुस्मन हो । अमेरिका हामीदेखि डराउँछ भने यसको अर्थ हुन्छ, हामी उसका दुस्मन हौँ र एउटा खतरनाक दुस्मन । विज्ञान र प्रविधिमा हामीले गोपनीयतामा ध्यान दिनुपर्नेछ जसले गर्दा उनीहरूले हाम्रो गुप्त क्षमताशीलता निर्धारण गर्न नसकून् ।
स्रोत :ज्ञान सिद्धान्त र विज्ञान–प्रविधिबारे (सकाताको आलेखबारे कुराकानी) अनुवाद : हेमन्तप्रकाश वली ‘सुदर्शन’, यो रचना श्रमिकवर्ग प्रचूरानालु हैदराबाद भारतद्वारा सन् १९९४ मा अङ्ग्रेजीमा प्रकाशित माओ चुनिएका रचनाको ग्रन्थ ९, पृ. १४७–१५३ बाट नेपालीमा उल्था गरिएको हो ।